မင်းတို့ဘဝမှာ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ် မင်းတို့ရဲ့ဘဝကို မင်းတို့မိဘတွေထက် ပိုသာလွန်တဲ့ ဘဝဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ် - Thadin
HomeKNOWLEDGEမင်းတို့ဘဝမှာ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ် မင်းတို့ရဲ့ဘဝကို မင်းတို့မိဘတွေထက် ပိုသာလွန်တဲ့ ဘဝဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်
မင်းတို့ဘဝမှာ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ် မင်းတို့ရဲ့ဘဝကို မင်းတို့မိဘတွေထက် ပိုသာလွန်တဲ့ ဘဝဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်
February 11, 2019 Admin Kwee KNOWLEDGE Comments Off on မင်းတို့ဘဝမှာ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ် မင်းတို့ရဲ့ဘဝကို မင်းတို့မိဘတွေထက် ပိုသာလွန်တဲ့ ဘဝဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်
( ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း၏ ဒဿနများ )
” တာဝန်နှစ်ခု ”
မင်းအသက် ၃၀ ငါ့အသက် ၈၆ဒါအချိန်ပဲအချိန်ကဘဝပဲအချိန်မပါဘဲ ဘဝကိုဖွဲ့စည်းလို့မရဘူးမင်းဘဝကိုတန်ဖိုးထားရင်မင်းရဲ့အချိန်ကိုလည်း တန်ဖိုးထားရလိမ့်မယ်။
” နှလုံးသားလှဖို့လိုတယ် ”
ကဗျာရူးရယ် စာရူးရယ် အချစ်ရူးရယ်ငါအချစ်ဆုံးပဲသူတို့ကနှလုံးသားရှိလို့ဥစ္စာရူးရယ် အာဏာရူးရယ် ငါအမုန်းဆုံးသူတို့ကနှလုံးသားမရှိလို့
” အားခဲထားနိုင်ရမယ် ”
” အကျင့် ”
” သတိမမူရင် ဂူမမြင်ဘူး ”
လူတွေကသူများထီပေါက်ရင်သာငါလည်း ထီပေါက်နိုင်တယ်လို့ တွေးတတ်ကြတာသူများကားတိုက်ရင်ငါလည်း ကားတိုက်ခံရနိုင်တယ်လို့မတွေးကြဘူးသူများအောင်မြင်ရင်သာငါလည်းအောင်မြင်မယ်လို့သာ တွေးကြတာသူများကျရှုံးရင်ငါလည်း ကျရှုံးနိုင်တယ်လို့မတွေးကြဘူးသတိထား အစစအရာရာသတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိဘူး။
” အခိုက်အတန့် ”
လူတွေကချမ်းသာခြင်းသာသင်္ခါရလို့ထင်တယ်တစ်ကယ်တော့ဆင်းရဲခြင်းလည်း သင်္ခါရပဲမင်းကြိုးစားနေသမျှကာလပတ်လုံးအဆင်မပြေခြင်းက သင်္ခါရမင်း မကြိုးစားပဲရေသာခို အချောင်နေနေသရွေ့မင်းအတွက်ဆင်းရဲခြင်းကထာဝရပဲ။
” တောင်းမှာအကွပ် ”
အသိပညာရှိသောသူ၊ ဆုံးမထိုက်သောသူ၊ ဆုံးမရန်ဝတ္တရားရှိသောသူတွေကိုကပစ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ဘဝ သေပြီလို့မှတ်လိုက်တော့.
“ကိုယ့်အတွက်ချည်းပဲ မကြည့်ဘဲ သူများအတွက်လည်းကြည့်ပေးနိုင်တာကလည်းယဉ်ကျေးမှုပဲ”
ကိုယ်မရသင့်တာကို မယူချင်ပါနဲ့..ကိုယ်မရသင့်တာကို ယူလိုက်မိရင်ကိုယ်မလိုချင်တာတွေကိုပါ လက်ခံရတတ်တယ်။
” လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာ ”
လူလိမ္မာတို့သည် တစ်ပါးသူ၏ အမှားမှ သင်ခန်းစာကို ယူတတ်ကြတယ်လူမိုက်တို့သည် ကိုယ်တိုင်မှားမှ သင်ခန်းစာရကြတယ်ပို၍ မိုက်မဲသောသူတို့ကား ကိုယ်တိုင် မှားပါလျက် နှင့်ပင် သင်ခန်းစာ မယူတတ်ကြကုန်တဲ့
တညည်းညည်း တညူညူနဲ့”ငါတော့ ကံဆိုးတာပဲလို့ အောက်မေ့နေရင်အဲဒီလူ တစ်ကယ်ကံဆိုးသွားပြီလို့သာအောက်မေ့ပေတော့..လောကကြီးမှာ ရှုံးလို့ထွက်ပြေးရင် တစ်သက်လုံးပြေးပေတော့..
အောင်မြင်မှု ဘယ်တော့မှ မရဘူး..ထွက်ပြေးတဲ့ကောင် ဘယ်တော့မှနိုင်ရိုးမရှိဘူး..ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ကောင်မှ နိုင်တာဆရာကြီးအားလေးစားလျက်ပါ။
( ဆရာကှီး ဦးအောငသြငြး၏ ဒဿနမွား )
” တာဝနနြှစခြု ”
မငြးအသကြ ၃၀ ငါ့အသကြ ၈၆ဒါအခွိနပြဲအခွိနကြဘဝပဲအခွိနမြပါဘဲ ဘဝကိုဖှဲ့စညြးလို့မရဘူးမငြးဘဝကိုတနဖြိုးထားရငမြငြးရဲ့အခွိနကြိုလညြး တနဖြိုးထားရလိမြ့မယြ။
” နှလုံးသားလှဖို့လိုတယြ ”
ကဗွာရူးရယြ စာရူးရယြ အခစွရြူးရယငြါအခစွဆြုံးပဲသူတို့ကနှလုံးသားရှိလို့ဥဈစာရူးရယြ အာဏာရူးရယြ ငါအမုနြးဆုံးသူတို့ကနှလုံးသားမရှိလို့
” အားခဲထားနိုငရြမယြ ”
” အကငြွ့ ”
” သတိမမူရငြ ဂူမမှငဘြူး ”
လူတှကသေူမွားထီပေါကရြငသြာငါလညြး ထီပေါကနြိုငတြယလြို့ တှေးတတကြှတာသူမွားကားတိုကရြငငြါလညြး ကားတိုကခြံရနိုငတြယလြို့မတှေးကှဘူးသူမွားအောငမြှငရြငသြာငါလညြးအောငမြှငမြယလြို့သာ တှေးကှတာသူမွားကရွှုံးရငငြါလညြး ကရွှုံးနိုငတြယလြို့မတှေးကှဘူးသတိထား အစစအရာရာသတိဆိုတာ ပိုတယမြရှိဘူး
” အခိုကအြတနြ့ ”
လူတှကခေမြွးသာခှငြးသာသငျြခါရလို့ထငတြယတြစကြယတြော့ဆငြးရဲခှငြးလညြး သငျြခါရပဲမငြးကှိုးစားနသမွှေကာလပတလြုံးအဆငမြပှခှငြေးက သငျြခါရမငြး မကှိုးစားပဲရသောခို အခွောငနြနသေရှေမေ့ငြးအတှကဆြငြးရဲခှငြးကထာဝရပဲ
” တောငြးမှာအကှပြ ”
အသိပညာရှိသောသူ၊ ဆုံးမထိုကသြောသူ၊ ဆုံးမရနဝြတျတရားရှိသောသူတှကေိုကပစပြယလြိုကပြှီဆိုရငတြော့အဲ့ဒီကောငဘြဝ သပှေီလို့မှတလြိုကတြော့.
“ကိုယြ့အတှကခြညြွးပဲ မကှညြ့ဘဲ သူမွားအတှကလြညြးကှညြ့ပေးနိုငတြာကလညြးယဉကြွေးမှုပဲ”
ကိုယမြရသငြ့တာကို မယူခငွပြါနဲ့..ကိုယမြရသငြ့တာကို ယူလိုကမြိရငကြိုယမြလိုခငွတြာတှကေိုပါ လကခြံရတတတြယြ။
” လူမိုကနြှငြ့ လူလိမျမာ ”
လူလိမျမာတို့သညြ တစပြါးသူ၏ အမှားမှ သငခြနြးစာကို ယူတတကြှတယလြူမိုကတြို့သညြ ကိုယတြိုငမြှားမှ သငခြနြးစာရကှတယပြို၍ မိုကမြဲသောသူတို့ကား ကိုယတြိုငြ မှားပါလကြွ နှငြ့ပငြ သငခြနြးစာ မယူတတကြှကုနတြဲ့
တညညြးညညြး တညူညူနဲ့”ငါတော့ ကံဆိုးတာပဲလို့ အောကမြနေ့ရငေအြဲဒီလူ တစကြယကြံဆိုးသှားပှီလို့သာအောကမြပေ့တေော့..လောကကှီးမှာ ရှုံးလို့ထှကပြှေးရငြ တစသြကလြုံးပှေးပတေော့..
အောငမြှငမြှု ဘယတြော့မှ မရဘူး..ထှကပြှေးတဲ့ကောငြ ဘယတြော့မှနိုငရြိုးမရှိဘူး..ရငဆြိုငနြိုငတြဲ့ကောငမြှ နိုငတြာဆရာကှီးအားလေးစားလကွပြါ။
***ဘယ်သူ သတ်တာလဲ***တရားခံ ဘယ်သူလဲ
This Month : 35357
This Year : 176814
Total Users : 535838
Total views : 2423370